विद्यार्थीले आफ्नो 'रिजल्ट'लाई कसरि लिने ? अभिभावकले कसरि सहयोग गर्ने ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips विद्यार्थीले आफ्नो ‘रिजल्ट’लाई कसरि लिने ? अभिभावकले कसरि सहयोग गर्ने ?
विद्यार्थीले आफ्नो ‘रिजल्ट’लाई कसरि लिने ? अभिभावकले कसरि सहयोग गर्ने ?
विद्यालय होस् या कलेज लेभल, विद्यार्थीलाई परिक्षा र नतिजा विशेष हुन्छ । नतिजालाई लिएर विद्यार्थी आफैलाई तनाव त भएको हुन्छ नै, त्यसमाथि पारिवारिक र सामाजिक दबाबले गर्दा नतिजा पछि अप्रिय घटनाहरु पनि घट्ने गर्छन् । जिन्दगी भनेकै परिक्षा, नतिजा, सिकाई, परिक्षणहरुको संगालो हो । यो एउटा यात्रा हो । र, यो कुरालाई विद्यार्थी, परिवार र समाज सबैले बुझ्नु जरुरि छ ।
सबैभन्दा पहिले त दिमागलाई शान्त राख्नुहोस् । अभिभावक र विद्यार्थी दुवैले नतीजा जस्तोसुकै आएतापनि त्यसलाई स्विकार्ने मनस्थितिमा रहनुपर्छ । यसको लागि मेडिटेसन गर्ने, संगीत सुन्ने, परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बस्ने आदि गर्न सकिन्छ ।
पढाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले गर्दा नतिजाको पनि महत्व रहन्छ, तर जीवनमा कुनै एउटा लेभलमा मिलेको नतिजा नै सर्वश्व होइन । कुनै एउटा लेभलमा राम्रो नतिजा ल्याएको व्यक्तिले अर्को लेभलमा अपेक्षा गरे अनुरुपको नतिजा नल्याउन सक्छ र कुनै एउटा लेभलमा नराम्रो नतिजा ल्याएको व्यक्तिले अर्को लेभलमा राम्रो नतिजा ल्याउन पनि सक्छ ।
नतिजा विद्यार्थीको लागि एउटा अवसर हो । आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउने या अझ राम्रोसंग पढ्ने, पढ्नको लागि अझ प्रभावकारी तरिका पत्ता लगाउने अवसर हो ।
हामीले नतिजालाई अरुले आफूलाई गर्ने मूल्यांकनको रुपमा मात्र लिन्छौं । तर नतिजाबाट हामीले आफ्नो स्वमूल्यांकन गर्न सक्छौं । हामी कुन विषयमा राम्रो रहेछौं, कुन विषयमा आफ्नो रुची रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं । जसले गर्दा हामीले आफ्नो अगाडीको करियर तय गर्न सक्छौं ।
पढाइमा आफूले सोंचे अनुसार आफ्नो सन्तानले नतिजा ल्याएन भन्दैमा अभिभावक दुखी हुने या सन्तानलाई मानसिक तनाव दिने गर्नु हुँदैन । हुनसक्छ, ऊ अरु कुनै अतिरिक्त क्रियाकलापमा अगाडी छ । आफ्नो सन्तानको क्षमतालाई, उसको रुचिलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
नतिजा आइसकेपछि अगाडीको करियरको लागि के पढ्ने या के गर्ने भन्ने कुरामा ट्रेन्ड या अरुले जे गरिरहेको छन्, त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । आफ्नो रुचीको क्षेत्र बारे थप बुझ्ने, सम्बन्धित व्यक्ति या संस्थाहरुबाट परामर्श लिने, त्यसबारे बढी भन्दा बढी जानकारी लिने प्रयास गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।
नतिजाले गर्दा सन्तान तनावमा देखिएको छ भने अभिभावकले ऊसंग समय बिताउने, उसको कुरा सुन्ने, उसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । उसलाई जीवनको परिक्षामा तिमी फेल भएको छैनौ भन्ने बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ । उसलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफू ऊसंग रहने आभास दिलाउँदै उसलाई फेरी प्रयास गर्ने या अगाडी बढ्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।
Previousसफलताको आधार लगनशीलता : कस्तो हुन्छ लगनशील व्यक्ति ?
Nextमहान खेलाडी पेलेका जीवनोपयोगी भनाइहरु